Monday, 21 May 2012 14:29	नागरिक
धर्मराज अधिकारी, लण्डन- गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) आइसीसीका संरक्षक एवम् संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले एनआरएनको लगानी आफूले ग्यारेण्टी गर्ने विश्वास दिएका छन्।
एनआरएन युकेले आइतबार लण्डनमा आयोजना गरेको दोस्रो काउन्सिल भेलामा सहभागी भएका महतोले ढुक्क भएर देशमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै लगानी डुब्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए। व्यक्तिभन्दा देश धनी हुनुपर्ने बताउँदै देश धनी बनाउनतर्फ लाग्न एनआरएनलाई उनले आग्रह गरे। एनआरएनको सपना नै धनी र समृद्ध नेपाल भएकाले त्यो सपना साकार गर्न महतोले आग्रह गरेका थिए। नेपालमा लगानी डुब्ने कुनै सम्भावना नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा आइसीसीका अध्यक्ष जीवा लामिछानेले नेपालमा लगानी गर्न एनआरएनलाई विशेष आग्रह गरे। उनले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न सहभागीहरुलाई अपिल गर्दै जलविद्युत् अत्यन्तै आशावादी क्षेत्र भएको बताए। व्यापारमा जोखिम हुने भए पनि विद्युतमा लगानी गर्दा जोखिम नहुने विश्वास दिँदै उनले नहिच्किचाई लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए।
नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण लगानीकर्ताहरुमा केही निराशा छाए पनि त्यसले असर नपर्ने उनले बताए। देशमा शान्ति स्थापना भई संविधान बन्न लाग्नु शुभसङ्केत भएको बताउँदै उनले संविधानमा नागरिकताको प्रयास अन्तिम दिनसम्म जारी राख्‍ने बताए।
एनआरएन युकेका अध्यक्ष कुल आचार्यको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली दूतावास लण्डनका राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले एनआरएन छोटो समयमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए। नेपालमा लगानीको वातावरण भएको बताउँदै डा. चालिसेले त्रिपक्षीय लगानीको अवधारणा ल्याउन एनआरएनलाई सुझाव दिए। एनआरएन स्वदेशी व्यवसायी र विदेशी लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।
एनआरएन युकेका संरक्षक प्रा. डा सूर्यप्रसाद सुवेदीले प्रवासी नेपालीबाट देशले ठूलो अपेक्षा गरेको बताउँदै उनले मोडेल प्रोजेक्ट देखाउन एनआरएनलाई आग्रह गरे। देशमा पूर्ण संविधान आउने सम्भावना नरहेको जिकीर गर्दै कानुनवेत्तासमेत रहेका सुवेदीले थामथुमे संविधान आउन सक्ने अनुमान लगाए। देश राष्ट्रपतीय शासनमा जान नसक्नु प्रचण्ड त्रास हावी भएको उनले दावी गरेका थिए।
एनआरएन आइसीसीका उपाध्यक्ष क्याप्टेन हितमान गुरुङले एनआरएन नागरिकताको पछिल्लो प्रगतिका विषयमा जानकारी गराउँदै सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारसहितको नागरिकता आउन लागेको बताए।
एनआरएन युकेका संयोजक रामशण सिम्खडाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष एवम् कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र कँडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
यसपछि चलेको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा एनआरएन आइसीसीका प्रवक्ता डा. हेमराज शर्माले नेपाल हाउसका सम्बन्धमा पावर प्वाइन्ट प्रिजेण्टेशन दिएका थिए।
mahato nepal aama kaa sapoot hun.